Notsapainay ny ZTE Spro 2 | Androidsis
Alfonso de Frutos | | MWC, hevitra, ZTE
Ora vitsy lasa izay, nambara ireo nandresy tamin'ny Global Mobile Awards 2015, loka omena ireo fitaovana tsara indrindra amin'ny MWC 2015. Ary amin'ny sokajy "Fitaovana elektronika finday tsara indrindra" ZTE sy ny Smart Projector 2 na ny SPro 2 no nahazo ny loka.
Ary io dia rehefa mpanamboatra aziatika nanolotra ny taranaka faharoa tao amin'ny CES any Las Vegas amin'ny tetik'asa Android anao, dia nahomby tokoa. Ary amin'izao fotoana nahafahanay nitsapa azy izao dia tsy maintsy milaza aminao izahay fa ny ZTE SPro 2 dia fitaovana tena mahaliana
1 Tetik'asa maivana miaraka amin'ny fampisehoana mihoatra ny sahaza
2 ZTE Spro 2, misy ary vidiny
Tetik'asa maivana miaraka amin'ny fampisehoana mihoatra ny sahaza
Raha nahazo ny iray amin'ireo loka tamin'ny Global Mobile Awards 2 ny ZTE Spro 2015, dia ho an'ny endriny sy ny zava-bitany. Miaraka amin'ny refy 134 x 131 x 132.7 mm sy ny lanjan'ny 550 grama, dia tsy maintsy lazaina fa ny tetikasa ZTE mini Fitaovana tena maivana izy io, mety ho entina miaraka aminao amin'ny fampisehoana rehetra.
Ny Digital Light Processing System na DLP amin'ny fanafohezana azy amin'ny teny Anglisy dia hamela ny projecting Sary sy horonan-tsary hatramin'ny 120 santimetatra amin'ny famahana 1280 x 720p miaraka amin'ny famirapiratana 230 lumens. Asongadino ny rafitra fifantohany mandeha ho azy izay hanampy amin'ny fakana sary an-tsaina mazava kokoa ny atiny rehetra.
Ny ZTE Spro 2 dia miaraka amina processeur Qualcomm Snapdragon 800 ary ny Adreno 330que GPU, miaraka amin'ny RAM 3 GB sy ny fitehirizana 16 GB azo ahitam-bokatra hatramin'ny 2 TB amin'ny alàlan'ny slot micro SD card, dia mampanantena fa afaka mamindra horonantsary rehetra tsy mikorontana.
Araka ny hitanao amin'ny sary, eo alohan'ny ZTE Spro 2 misy a efijery mikasika 5 inch kely izay ahafahantsika mifehy ny fitaovana, ankoatra ny fampisehoana izay lalaovinao, raha eo amin'ny lafiny iray kosa ny lakilen'ny fanaraha-maso.
Ny fifandraisana dia tsy misy banga amin'ity tetik'asa Android mini ity: Bluetooth 4.0, USB 3.0, Wi-Fi, output HDM ary Mobile Hotspot.
Asongadino izany mamela anao hifandray amin'ny fitaovana 10 miaraka amin'ny alàlan'ny tamba-jotra 4G LTE, manohana ny famoahana atiny multimedia sy fampiharana amin'ny alàlan'ny Streaming. Ary tsy azonay adino ny batterie maheriny 6.300 mAh izay mampanantena ny hanome ny ZTE Spro 2 fahaleovan-tena mihoatra ny ampy hanohanana ny fitaovana rehetra amin'ity tetikasa mini android mahaliana ity nefa tsy hisavoritaka.
Tao anatin'ireo fitsapana navoakan'ny ZTE, raha jerena fa tena nazava ny fijoroana dia nahafa-po tokoa ny valiny. Azonao atao ny mahita ny asa lehibe vitan'ny mpanamboatra aziatika, manolotra gadget ilaina sy mora ampiasaina, miasa amin'ny Android 4.0, ary tantara vaovao.
ZTE Spro 2, misy ary vidiny
Na dia tsy te hanome daty marina aza i ZTE dia nampanantena izy fa ho tonga mandritra ny telovolana faharoa amin'ity taona ity ny ZTE Spro 2 amin'ny vidiny izay eo anelanelan'ny 400 sy 500 euro izany. Na dia marina aza fa tsy azo ampitahaina amin'ny projecteur mahazatra izy io, raha jerena ny refy sy ny lanjany, amiko dia iray amin'ireo gadget mahaliana indrindra sy mendrika ny loka nomena azy io.
Ary ho anao, Ahoana ny hevitrao momba ny ZTE Spro 2?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » ZTE » ZTE Spro 2, notsapainay ilay projet mini android mahaliana indrindra
Atorinay anao ny LG Watch Urban ny famantaranandro marani-tsaina indrindra amin'ny fotoana "tsy misy Android Wear"